Nhasi izuva rekuzvarwa kwaPaul Auster, munyori weAmerica uye mugadziri wefirimu | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Vanyori, Type, Literature, Nhema nhema
Sezvo zita redu rinoratidza, Nhasi izuva rekuzvarwa kwaPaul Auster, chaizvo 70 makore. Munyori akaberekerwa muNewark, New Jersey state (USA), ane yakafara uye yakasimbiswa mabhuku echikwamakuwedzera kune firimu, sezvo ari zvakare director director uye screenwriter.
Iye munyori akazara, uye kana iwe uchida labyrinthine uye inonakidza nyaya, kunyanya kubva nhema nhema, uchada kuverenga. Iyo ndeimwe yeakanakisa emhando iyi atinogona kuwana parizvino mumusika wezvinyorwa. Uye kana zvisina kudaro, pano tinopfupikisa mibairo uye kushongedza kwayakatambira pamusoro pemakore
Morton Dauwen Zabel Mubayiro 1990 (American Academy of Arts uye Tsamba).
Medici Mubayiro 1993 (France) yenyaya yakanaka kwazvo nemunyori wekunze yeruzivo rwake «Revhiatani ".
Independent Mweya Mubayiro 1995 yezvakanakisa yepakutanga screenplay yemufirimu wake «Chiutsi ».
Archbishop Juan de San Clemente Literary Mubairo 2000 na «Timbuktu ».
Knight weChirongwa cheUnyanzvi uye Tsamba (France, 1992).
Madrid Booksellers Guild Mubairo 2003 kubhuku rakanakisa regore re «Bhuku rekunyepedzera ».
Mubairo Chii chekuverenga 2005 yakapihwa nevaverengi vemagazini ino ye «Husiku hwechirevo ».
Muchinda weAsturias Mubairo weMabhuku kubva mugore ra2006.
Lethe Mubayiro 2009 (Leon).
Honorary Doctorate kubva kuNational University of General San Martín 2014.
1 Yakakurudzirwa mabasa naPaul Auster
1.1 "Muzinda wemwedzi" (Pari zvino wamiswa)
1.2 "Bhuku rezviratidzo"
1.3 "Vadzidzi veBrooklyn"
1.4 "Iyo New York Trilogy"
1.5 "Nguva yechando Diary"
Yakakurudzirwa mabasa naPaul Auster
Unogona kuverenga chinenge zvese nezvaPaul Auster, icho chauchanyatsoda, asi kana usati waverenga chero chinhu chake, tinokupa aya mashanu mazano.
"Muzinda wemwedzi" (Pari zvino wamiswa)
Marco Stanley Fogg ari padanho rehurume apo vafambi vanoisa tsoka pamwedzi. Mwanakomana wababa vasingazivikanwe, akadzidziswa nababamunini eccentric Sekuru Victor, uyo airidza clarinet mumakwenzi emakwenzi. Pakutanga kwenguva yemwedzi, babamunini vake vakafa, Marco akaramba achiwira murombo, kusurukirwa uye nerunyararo kupenga kwema nuances 'Dostoevskians', kusvikira iye akanaka Kitty Wu amununure. Marco anobva atanga kushandira mupendi wekare akaremara uye anonyora nhoroondo yake, iyo yaanoda kupa mwanakomana wake, uyo waasina kumbosangana naye. Mushure merwendo rurefu runomutora kuenda kuMadokero uye pasi pesimba remwedzi wese, Marco achawana zvakavanzika zvekwaakabva uye kuzivikanwa kwababa vake.
David Zimmer, munyori uye purofesa wezvinyorwa kubva kuVermont, haasisiri mumvuri wake. Anopedza mazuva ake achinwa nekufungisisa nguva yekupedzisira hupenyu hwake hwaigona kunge hwashanduka, nguva yaive mukadzi wake nevana vasati vakwira ndege yakaputika. Kusvikira husiku humwe, achitarisa asingatarise terevhizheni, uye kekutanga mushure memwedzi mitanhatu yekufamba-famba munzvimbo, chimwe chinhu chinomuseka. Chikonzero chechishamiso chidiki ndiHector Mann, mumwe wevanyaradzi vekupedzisira vateereri vemafirimu Uye David Zimmer anoona kuti haasati arova pasi padombo, kuti achiri kuda kurarama. Iye zvino achatanga tsvagiridzo yake yekunyora bhuku pamusoro paMann, mudiki, akangwara, mutambi anoshamisa akaberekerwa muArgentina, mumwe wemafirimu ake achangoburwa, Hakuna munhu, anotaurira nyaya yemurume uyo shamwari inokanganisa inogonesa kunwa mushonga unoitisa kunyangarika.
Nathan Glass akararama nekenza yemapapu uye kurambana mushure memakumi matatu emakore ekuroora, uye adzokera kuBrooklyn, kwaakagara paudiki Kusvika arwara aive mutengesi weinishuwarenzi; Iye zvino zvaasichafanirwa kuwana raramo, anoronga kunyora Bhuku reHuman Delirium. Iye achataura nezve zvese zvinoitika zvakamukomberedza, zvese zvinoitika kwaari uye zvinoitika kwaari. Anotanga kugara achienda kune bhawa revavakidzani uye anenge ave kuda murindiri. Uye anoendawo kuchitoro chechipiri-chebhuku chaHarry Brightman, ngochani ane tsika uyo asiri iye waanoti ndiye. Uye ipapo anosangana naTom, muzukuru wake, mwanakomana wehanzvadzi yake yaanoda yakafa. Jaya iri raive rakagona mudzidzi wepakoreji. Uye zvino, akasurukirwa, anotyaira tekisi uye anobatsira Brightman kuronga mabhuku ake ... Zvishoma nezvishoma, Nathan achaona kuti haana kuuya kuBrooklyn kuzofa, asi kuzorarama.
"Iyo New York Trilogy"
Inotanga Girazi reGirazi, ine munyori wenyaya yematsotsi uyo, netsaona, anoonekwa achibata semutikitivha mumigwagwa yeguta rezvikwiriso achibvunza kuti iye ndiani chaizvo. MuMweya, iyo maze yekutsvaga inoumbwa iyo Azul, mutikitivha, anofanira kuburitsa. MuChikamu Chakavharwa, protagonist anotumwa kutsvaga shamwari isipo yehudiki iyo yakasiya sutukesi izere nemanyoro asina kunyorwa ayo aishuvira kuona achiburitswa, nekuda kwezvikonzero zvinovhiringidza. Mumabasa aPaul Auster, zviitiko zvinoitika. hunhu hunenge husina basa: zvidiki zvinoita mutsauko nemamiriro ezvinhu mukana sarudzo. Kuferefetwa kweumwe kunova kutsvaga wega, mune chishuwo chekutsvaga chako uye chakasarudzika kuzivikanwa
"Nguva yechando Diary"
Paul Auster, "mumwe wevanyori vakakurumbira venguva yedu" (San Francisco Chronicle), pano anozvitarisa. Makore makumi matatu mushure mekuburitswa kweThe Invention of Solitude, bhuku rake rekutanga reprozi, Auster anotanga kubva pakuuya kwezviratidzo zvekutanga zvekukwegura kumutsa zviitiko muhupenyu hwake: kumutswa kwechido chebonde, zvisungo zvemuchato, tsaona yemotokari, kufa kwaamai vake kana dzimba makumi maviri neimwe dzaakagara.
Pane zvishanu chete kurudziro yevakawanda iyo yatinogona kuramba tichiita: "Leviathan", "Invisible", "Murume murima", "Red bookbook", zvichingodaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhasi izuva rekuzvarwa kwaPaul Auster